जेलबाटै प्रचण्डलाई बालकृष्ण ढुङेलको पत्र – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ जेलबाटै प्रचण्डलाई बालकृष्ण ढुङेलको पत्र
जेलबाटै प्रचण्डलाई बालकृष्ण ढुङेलको पत्र
पुलेसो १० पुस, २०७८, शनिबार ९:४४
श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यु , अभिवादन !!
तपाई अहिले आफ्नो जन्मभुमि चितवनमा प्राप्त भएकाे जितकाे खुसि एकातिर र एकमात्र पुत्र प्रकाशकाे बियाेगकाे पिडा अर्कोतिर । यि चिजलाई फ्युजन गरेर दृढताका साथ अघि बढन सक्नु तपाई भित्रकाे छुट्टै विशेषता हाे ।
क .प्रकाशकाे निधनमा मैले भाैतिक उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्न त पाईननै तर यस जेलकाे चार दिवार भित्र बसेर मनमनै श्रद्दासुमन अर्पन गरे र मनलाई स्तब्ध बनायाे । म गिरफ्तारी परेकाे करिब डेढ महिना नाघिसक्याे ।गिरफ्तारी लगत्तै क.गाेपाल किराती ( साईला ) भेटन आउनु भयाे र सहानुभुति ब्यक्त गर्नुभयाे ।
मेरै जिल्लाका नेताहरु भेट गर्न आउनु स्वभाविकै हाे । त्यसबाहेक मेराे गिरफ्तारी बृहत शान्ति सम्झाैता विपरित हाे , याे जनयुद्ध कालिन मुद्धा हाे भन्ने सेन्टिमेन्ट बाेकेर पार्टि हेड क्वाटरबाट अहिले सम्म कोहिपनि भेटन आएका छैनन्। पुत्र बियाेग र चुनाबकाे बखत भेटन आउनु भएन त्याे स्वभाबिकै हाे किनकि त्यस समय तपाईकाे पिडा र निर्वाचनकाे चटाराेकाे कुरा मैले बुझेकै हुँ । अब निर्वाचन पनि सक्कियाे , भारी मतले जितपनि हासिल गर्नुभयाे ।
तर तपाईलाई मलाई भेटन डिल्लि बजार जेल सम्मकाे दुरि टाढा भयाे या अनिच्छा पैदा भयाे ,र तपाई आउनु भएन ? तपाईकाे १० मिनेटकाे भेटकाे समय कति महत्वपुर्ण र साहनुभुतिपुर्ण हुन्थ्याे तपाईले कहिले आंकलन गर्नुभयाे ? किनकि १० बर्षे जनयुद्ध तपाईकै अभिभाबकत्वमा लडिएकाे हैन र ? मानाै तपाईले भ्याउनु भएन ठिकै छ ,तपाईका काेही कसैलाई तपाईकाे खबर पठाउन त सक्नु हुन्थ्याे नि कि हैन र ? ठिक छ भेटकाे सन्दर्भलाई यहि छाेडाै । म हाम्राे पार्टिकाे पाेलिट ब्युराे सदस्य हुँ ।
याे मेराे क्षमता र तपाईले मलाई पत्याएरै दिएकाे जिम्मेवारी हुनुपर्छ । एउटा पार्टिकाे पाेलिटब्युराे सदस्य जनयुद्दकालिन मुद्दामा त्यहिमाथि ब्यकसुर ब्यक्ति गरफ्तारी पर्दा विज्ञप्ति सम्म निकाल्न सक्नु भएन यसकाे कारण के हुनसक्छ ।
याे त सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयाेगले टुङ्ग्याउने समझदारीबाट तपाई हामि काहॉंनिर चुक्याै ? यसकाे हिसाब किताब पार्टिले राख्नु जरुरि छ कि छैन ? भर्खरै माैलाउदै गएकाे एमाले संगकाे सम्बन्ध बिग्रेला भन्ने डरले या त चरण प्रसाई , कणकमणी दिक्षित लगाएका डलरबादीहरुसंग डराएर विज्ञप्ति निकाल्नु भएन । म अहिले जेलकाे चिसाे छिडिमा रहदै गर्दा चार ओटा राेगसंग एकैसाथ लडिरहेकाे छु ।जेलकाे परिबन्धमा उपचार त्यति सहज छैन अध्यक्ष ज्यु ।
भनेकाे सामय र भनेकाे डाक्टरलाई भेटन पाईदैन यहाँ। याे मैले पहिले ८ बर्ष जेल बस्दा नै भाेगेकाे तिताे यथार्थ हाे । उच्च रक्तचाप त छदैथियाे त्यहिमाथी सुगर पनि छ । मेराे दुबै मृगाैलाले काम गर्न छाेडेकाे यहाँलाई जानकारी नै छ ।
अध्यक्ष ज्यु म तलाईकै आदेसमा काम गर्ने एक सिपाही हैन र ? अहिले जुन हत्या अभियाेगमा म जेल भित्र छु ,त्याे घटना मैले गरेकाे हैन यहाँलाई पनि थाहा छ । केहि डलर बादीहरुले डलर पचाउन रचिएकाे प्रपन्च मात्र हाे म ब्यकसुर हुदापनि किन जबरजस्ती थुनाईयाे ? हजुरले आत्मा साक्षिराखी भन्नुस म थुनिदा तपाईकाे मन कत्तिपनि कुंडिएकाे छैन र ? म थुनिनु भनेकाे तपाई थुनिए जस्ताे हैन र अध्यक्ष ज्यु ? कि माउ बचाउन चल्लाकाे बली चढाईएकाे हाे ? बाँकि अर्काे पत्रमा या भेटमा प्रचण्ड ज्यु
– सदरखाेर डिल्लीबजार
( एभ्रेष्ट दैनिक बाट )